Chloasma (တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Chloasma (တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်းသည် မျက်နှာပေါ်တွင် မီးခိုးရောင်၊ အညိုရောင်အကွက်များပေါ်လာသော အဖြစ်များသည့် အရေပြား ပြသနာဖြစ်ပါသည်။ အများစုသည် ပါးနှစ်ဖက်၊ နှာခေါင်းရိုး၊ နဖူး၊ မေးစေ့ နှင့် နှုတ်ခမ်းအပေါ်ပိုင်းတွင် အဖြစ်များပါသည်။ သို့သော် နေအထိများသော လက်မောင်း၊ လည်ပင်းစသည့် နေရာများတွင်လည်းဖြစိနိုင်ပါသည်။
Chloasma (တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အမေရိကန်ရှိ အရေပြား တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာချက်များ အရ တင်တိတ်ဖြစ်သောသူများ၏ ၉၀% သည်အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ အသားညိုသော လူမျိုးများဖြစ်သည့် လက်တင်၊ မြောက်အာဖရိက၊ အာဖရိက-အမေရိကန်၊ အာရှ၊ အိန္ဒိယ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် မြေထဲပင်လယ်တဝိုက်ရှိလူများသည် တင်းတိတ်ပို ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။
ထို့ပြင်တင်းတိတ်ဖြစ်သူများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်သူများသည် တင်းတိတ်ပိုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ သို့သော် ထိုဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သော အချက်များကို လျှော့ချခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း တိကျသော သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
Chloasma (တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တင်းတိတ်ဆိုသည်မှာ အရေပြားတွင်ဖြစ်သော အရောင်မညီသော အကွက်များဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် သင့်အရေပြားအရောင်ထက်ပို နက်ပြီး မျက်နှာနှစ်ဖက်တွင် အချိုးညီစွားဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ ထို့ပြင် နေအထိများသော လက်မောင်း၊ လည်ပင်းစသည့် နေရာများတွင်လည်းဖြစိနိုင်ပါသည်။
မေးစေ့ တို့တွင် ပို အဖြစ်များပြီး လက်မောင်း၊ လည်ပင်းစသည့် နေရာများတွင်လည်းဖြစိနိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းများသည် သင့်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အန္တရာယ်ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်သော်လည်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုများ ကျဆင်းစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် သွားပြပါ။ သင့်ဆရာဝန်မှတဆင့် အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ထံသို့ လွှဲပေးပါလိမ့်မည်။
Chloasma (တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းများကို တိကျစွာ မသိရသေးပါ။ အရေပြားတွင် မီလနင် ရောင်ခြယ်ကို ထုတ်ပေးသော ဆဲလ်များကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ အသားညိုသောသူများသည် မီလနင်ထုတ်သော ဆဲလ်များပိုများခြင်းကြောင့် အသားဖြူသူများထက် တင်းတိတ်ပိုဖြစ်လွယ်ပါသည်။ တင်းတိတ်ကို အဖြစ်များစေသော အရာများမှာ
နေရောင်ခြာ်နှင့်အတူပါလာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များသည် မီလနင်ထုတ်ပေးသော ဆဲလ်များကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ တင်းတိတ်များ ပျောက်သွားပြီးသည့်တိုင် နေရောင်ခြည်နှင့် အနည်းငယ်ပြန်ထိတွေ့ရုံမျှနှင့် ပြန်ဖြစ်လာစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် တင်းတိတ်များသည် နွေရာသီတွင် ပိုဆိုးလာခြင်းဖြစ်ပြီး မပျောက်ကင်းနိုင်ဘဲ ထပ်တလဲလဲပြန်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် တင်းတိတ်ပေါက်လေ့ရှိပါသည်။ တင်းတိတ်ကို ကိုယ်ဝန်သည်များ၏ မျက်နှာဖုံးအဖြစ် တင်စားလေ့ရှိကြသည်။ ထို့ပြင် ကိုယ်ဝန်တားဆေးများနှင့် ဟော်မုန်းဆေးများကလည်း တင်းတိတ်ကို ဖြစ်စေပါသည်။
အချို့သော အလှကုန်ပစ္စည်းများသည် တင်းတိတ်ကို ပိုဆိုးစေပါသည်။
Chloasma (တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းများကို တိကျစွာ မသိရသေးပါ။ အသားညိုသောသူများသည် မီလနင်ထုတ်သော ဆဲလ်များပိုများခြင်းကြောင့် အသားဖြူသူများထက် တင်းတိတ်ပိုဖြစ်လွယ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ သနေ္ဓတားဆေးများသောက်ခြင်း၊ ဟော်မုန်းဆေးများသောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာထဲတွင် Estrogen and progesterone ဟော်မုန်းများ ပြောင်းလဲခြင်းသည်လည်း တင်းတိတ်ကိုဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ပြင် စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း နှင့် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းရောဂါများကလည်း တင်းတိတ်ကို ဖြစ်စေကြောင်းသိရသည်။
Chloasma (တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
တင်းတိတ်ဖြစ်သော နေရာကို စစ်ဆေးကြည့်ရုံမျှနှင့် တင်းတိတ်ဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အခြားသော ရောဂါအကြောင်းရင်းများကို သိရရန် ဆရာဝန်က လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ယင်းတို့အနက် စစ်ဆေးမှုတခုမှာ Wood lamp ဟုခေါ်သည့် အလင်းရောင်ဖြင့် စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန်က အရေပြားကို ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်သည့် အလင်းရောင်ဖြင့် မည်သည့်အလွှာအထိတင်းတိတ်ဖြစ်နေသလဲ၊ ရောဂါပိုးများဝင်နေသလား စသည်ဖြင့် တိကျစွာ သိနိုင်ပါသည်။ အသားစယူစစ်ခြင်းဖြင့်လည်း ဆိုးရွားသော အရေပြားပြသနာများကို အဖြေရှာနိုင်ပါသည်။ အသားစယူခြင်းသည် ရောဂါဖြစ်နေသော အရေပြားနေရာတွင် ရှိသော အသားစကို ယူပြီး ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
Chloasma (တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
တင်းတိတ်များသည် တင်းတိတ်ဖြစ်စေသော အကြောင်းများဖြစ်သည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်တားဆေးများသောက်ခြင်း စသည်တို့မရှိတော့သည့်အခါ သူ့အလိုလိုပျောက်သွားတတ်ကြပါသည်။ သို့သော် အချို့သူများတွင် မူ မပျောက်ဘဲ နှစ်လကြာစွာရှိနေခြင်း၊ တသက်လုံးမပျောက်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တင်းတိတ်များသည် ထိုသို့ မပျောက်ခဲ့လျှင် သိုကမဟုတ် ကိုယ်ဝန်တားဆေးများဆက်သောက်နေရလျှင် အောက်ပါကုသမှုများဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။
ထိုဆေးသည် တင်းတိတ်သမားများအတွက် အသုံးများသော ပထမတန်းစားဆေးဖြစ်သည်။ ဆေးကို အရေပြားပေါ်တွင် လိမ်းလိုက်သောအခါ အရေပြားဝင်းလက်သွားပါသည်။ ထိုဆေးကို ခရင်မ်၊ လိမ်းဆေးရည်၊ ဂျယ်လီ ၊ ဆေးရည် ပုံစံများဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုဘဲ ဆေးကောင်တာများတွင် ဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုဆေးများသည် အရေပြားဆရာဝန်များ ညွှန်လေ့ရှိသည့် ဆေးဖြစ်ပီး Hydroquinone ဓါတ်ပါဝင်ပါသည်။
အရေပြားဆရာဝန်သည် သင့်အရေပြားကို တောက်ပစေရန် ဒုတိယ အမျိုးအစားအနေဖြင့် Tretinoin သို့မဟုတ် corticosteroids ကို ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။ တခါတရံတွင် ဆေးတတောင့်တည်းတွင် ဆေး ၃မျိုး(hydroquinone, tretinoin, andacorticosteroid) ပေါင်းထားသည့်ပုံစံလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယင်းကို သုံးမျိုးစပ်ဆေးခရင်မ်ဟုလည်း ခေါ်ပါသည်။
အကယ်၍ လိမ်းဆေးခရင်မ်များသည် သင့်တင်းတိတ်များကို မသက်သာစေလျှင် ဓါတုဗေဒနည်းများဖြင့် glycolic acid သးုံပြီး အရေပြားအပေါ်လွှာကို ချွတ်ခြင်း၊ အရေပြား အပေါ်ယံလွှာကို ဖယ်ရှားခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုကုသမှုများသည် ကုသခြင်းခံရသူ၏ အရေပြားပုံစံနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော အခါ နောက်ထပ်အရေပြား ပြသနာများခံစားရနိုင်ပါသည်။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တင်းတိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သူများအတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ။
နေရောင်ကာ ခရမ်များကို နေ့စဉ်လိမ်းပါ။
နေရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကို ကာကွယ်ခြင်းသည် တင်းတိတ်ကုသနည်းများထဲမှ တခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နေကာခရမ်ကို နေပူသောနေ့များတွင်သာမက တိမ်ထူသော နေ့များတွင်ပါလိမ်းရန်လိုပြီး ရေကူးပြီးလျှင်၊ ချွေးပြန်သွားလျှင် အမြဲပြန်လိမ်းရပါမည်။
နေရောင်ကာ ခရင်မ်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် SPF 30 နှင့်အထက်ပါဝင်ပြီး zinc oxide နှင့် titanium dioxide ပါဝင်သော ခရင်မ်များကို ရွေးချယ်ပါ။ ထိုခရင်မ်ကို အပြင်မသွားမီ ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြိုလိမ်းပြီး ၂ နာရီခြား တစ်ခါ လိမ်းပေးရန်လိုပါသည်။
အပြင်သွားလျှင် ဦးထုပ်အကားကို ဆောင်းပါ။
ဂျာနယ်များတွင် ဖော်ပြထားသော လေ့လာမှုများအရ နေကာခရင်မ်များအပြင် ဦးထုပ်အကားများ၊ လုံခြုံသော အဝတ်အစားမျာဝတ်ဆင်ခြင်းပြုမှသာ နေရောင်ကို ထိထိမိမိကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အားမပြင်းသော အသားရေထိန်းပစ္စည်းများကို သုံးပါ။
အရေပြားကို ပူစပ်စပ်ဖြစ်စေသော အသားအရေထိန်းပစ္စည်းများသည် သင့်အရေပြားကို ပိုဆိုးစေသော ကြောင့် အသုံးမပြုပါနှင့်။
အရေပြားကို ဖယောင်းသွင်းပြီး အမွှေးချွတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ပါ။
အရေပြားကို ဖယောင်းသွင်းပြီး အမွှေးချွတ်ခြင်းသည် အရေပြားကို ရောင်ရမ်းစေပြီး တင်းတိတ်များကို ပိုဆိုးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် တင်းတိတ်ဖြစ်သောနေရာများကို ဖယောင်းသွင်းခြင်းရှောင်ကျဉ်ပါ။ သင့်အရေပြားဆရာဝန်အားမေးမြန်းပြီး သင့်တော်သော အခြားအမွေးအမျှင် ဖယ်ရှားသည့်နည်းလမ်းများကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
https://www.aad.org/public/diseases/color-problems/melasma#overview. Accessed 19 Feb, 2017.
http://www.healthline.com/health/melasma#Overview1. Accessed 19 Feb, 2017.
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/melasma-directory. Accessed 19 Feb, 2017.